Okuphuthumayo Live | Umagazini wosizo wamazwe ngamazwe
NgoMgqibelo, Septhemba 21, 2019
Ukuphila Okuphuthumayo - Ukunakekelwa Ngaphambi Kwebhedlela, Ambulance Services, Magazine Safety and Civil Protection Magazine
IFrance, abakwaSapeur-Pompers bafaka uguquko kwezinsizakalo ze-ambulensi
Ukuphila okuphuthumayo	 Septhemba 19, 2019
Isiguli Esinzima Nge-Drunk ku-Ambulensi
Ukuphila okuphuthumayo	 Aug 30, 2019
Ukusesha Nokutakula Ama-NGO: akukho emthethweni?
Ukuphila okuphuthumayo	 Aug 27, 2019
Izinja zokusindisa amanzi: ziqeqeshwa kanjani?
Ukuphila okuphuthumayo	 Aug 26, 2019
Udlame olubhekiswe kubahlinzeki be-EMS - Abezimo eziphuthumayo bahlukunyeziwe begwaze…
Martina Tesser	 Jun 27, 2019
Ambulensi Museum eDenmark - Umhlahlandlela omfushane wabavakashi kanye nabachwepheshe
Ukuphila okuphuthumayo	 Septhemba 3, 2019
Ufuna ukwazi kabanzi ngomlando we-ambulensi? I-Emergency Live ikulethela kumbhalo wesikhathi somshini! Silandele futhi uthole…
Izintaba zenqaba ukusindiswa yi-Alpine Rescue. Bazokhokhela i-HEMS…
Ukuphazamiseka Kwethekhinoloji Kuliguqula Kanjani Ikusasa Lika…
Ukuphila okuphuthumayo	 Septhemba 17, 2019
Ukuphepha Nokulondolozwa Kwazazi Zezimboni Ezingaphandle: i-SAFER
Ama-Drones okuphatha igazi nemishini yezokwelapha phakathi…
Martina Tesser	 UJan 29, 2019
Isinyathelo esingaphezulu kokuqongelwa imali: I-Red Cross iqale eyokuqala…
Ukuphila okuphuthumayo	 Septhemba 8, 2017 0
I-Medical Fair Thailand - Ukuhola esifundeni…
Martina Tesser	 Jul 5, 2017
I-Japan Coast Guard iyala izindiza ezintathu ze-H225 ezengeziwe
Martina Tesser	 Jun 22, 2017
Umqondisi omusha Wezokwelapha eKayentis: U-Estelle Haenel uthathe…
Ukuphila okuphuthumayo	 Septhemba 9, 2019
Kuthiwani ngokusekelwa kwe-ambulensi?
Ukuphila okuphuthumayo	 Aug 28, 2019 0
Ukukhetha isigqoko sezimo eziphuthumayo. Ukuphepha kwakho kuqala!
I-ambulensi yezithuthuthu noma i-ambulensi esekwe ku-van - Kungani…
Ungasithola kanjani isikhathi sokuphendula esisheshayo? Isixazululo se-Israeli…
Ukuphila okuphuthumayo	 Jun 17, 2019
Iyunithi yokuphumelela yokunakekelwa okuphuthumayo, isixazululo ...
Ukuphila okuphuthumayo	 Jun 10, 2019 0
Iyalayisha ...	Layisha amaposi Ngini	Awekho Okuthunyelwe Okungekho
Izicishamlilo zibuyela ekhaya emuva kwemisebenzi yokuhlenga iSiphepho Dorian
Izicishamlilo zaseGainesville zibuya eBahamas lapho zisiza imiphakathi eshaywe yiSiphepho uDorian. Iqembu labaphenduli bokuqala lachitha izinsuku ezinhlanu eLittle Abaco lisiza emizameni yokusiza nokutakula. Izicishamlilo zimemezele ukuthi…
Ukuvuselelwa okusha kwe-iPhone: ingabe izimvume zendawo zizothinta imiphumela ye-OHCA?
Ukuphila okuphuthumayo	 Septhemba 12, 2019
I-iOS 13 kuzoba yisibuyekezo esisha sama-smartphones e-iPhone kanti izimvume zayo ezintsha zizoba nomthelela ekusetshenzisweni kwamanethiwekhi okuphendula kuqala kuma-OHCA (ukuboshwa okungaphandle kwasesibhedlela). Impendulo ye-OHCA yenziwe…
EBahamas: Izinto eziza kuqala endaweni yokubeka indawo yokuhlala kanye namanzi ahlanzekile ngenxa yesiphepho “esiyinhlekelele”
Ukuphila okuphuthumayo	 Septhemba 2, 2019
ISiphepho Dorian sidale umonakalo omkhulu kuzo zonke iziqhingi zase-Abaco naseGrand Bahama eBahamas, ngokusho kokuhlolwa kokuqala okwenziwe yiziphathimandla nezikhulu zeRed Cross phansi. Ngokwemibiko le, uDorian…
Usuku lomhlaba wokusiza umphakathi i-2019. Iphefumlelwe abesifazane
Ukuphila okuphuthumayo	 Aug 7, 2019
Umkhankaso wosuku lwe-2019 World Humanitarian Day lugubha abesifazane nge-#WomenHumanitarians hashtag World Humanitarian Day njalo nge-19th ka-Agasti. Umgubho uhlonipha imizamo yokusizakala emhlabeni wonke nokusabalalisa umbono we…
Udlame olubhekiswe kwabanikezeli be-EMS - Abezimo eziphuthumayo bahlukunyeziwe endaweni yesehlakalo
Ukugwaza kuyinkinga enzima ukubhekana nayo. Abahlinzeki be-EMS kumele bahlole ngokucophelela isimo futhi bahlose ukusekelwa amaphoyisa. Ukuziphatha kwe-Paramedics ne-EMTs kubaluleke kakhulu ukusebenza ngokuphepha ngaphandle kokulimala. Udaba…
Izimo eziphuthumayo ezindaweni zasemakhaya e-Afrika - Ukubaluleka kodokotela abahlinzayo
Martina Tesser	 Kwangathi 16, 2019
Odokotela abahlinzayo bafaka indima ebalulekile emithini yokuphuthumayo kodwa abangenayo ezindaweni eziningi zasemakhaya zase-Afrika. Izwe lase-Afrika lidumile ngezindawo zalo zasendle nezasemaphandleni, okuyinto minyaka yonke idonsela izinkulungwane zezivakashi. Ubuhle bendabuko be-Afrika ...
Yithi ukubonga kubaphenduli bokuqala: Ukubonga kungonga izimpilo!
Ukuphazamiseka Kwezobuchwepheshe Kusishintsha Kanjani Ikusasa Lezempilo
Izithuthi zokuVikela ze-Iveco zamabutho amaDashi ahlomile anezimoto ezintsha
Izintaba zenqaba ukusindiswa yi-Alpine Rescue. Ba…
IJapan ihlanganise izindiza ezinophephela emhlane ezingena odokotela zibe…
I-Emergency Live ngumagazini owodwa wezilimi eziningi ozinikezele kubantu abathintekayo ekukhululeni naseziphuthumayo. Njengalokhu, yiloluhlobo oluhle ngokuya ngesivinini kanye nezindleko zezinkampani zokuhweba ukuze kufinyelele izinombolo ezinkulu zabasebenzisi abathintekayo; isibonelo, zonke izinkampani ezihilelekile ngendlela ethile ekuhlinzekeni izindlela ezikhethekile zokuthutha. Kusuka kubakhiqizi bemoto kuya ezinkampanini ezihilelekile ekuhlinzekeni lezo zimoto, kunoma yimuphi umhlinzeki wokugcina impilo nokusiza kanye nokusiza.
I-Piazzale Badalocchio 9 / b
I-43126 Parma (PR) - i-Italy
Ifoni: + 39 340 2246247
Bhala ku info@emergency-live.com noma iya ku- faka iposi.
Inombolo ye-VAT: IT02277610347
© 2019 - Live Ephuthumayo. Wonke Amalungelo Agodliwe.